Siyaasadda Daroogada: Peter “Sharci” De Vries Iyo Xildhibaanada Mamnuuca ah ee La Qabatimay • Dawooyinka Inc.eu
2 Golaha Wakiilada
Kadib isku daygii dil fuleynimada ahaa ee lagu qaadey Peter R. de Vries, dooda ku saabsan siyaasada daroogada ayaa si buuxda u qarxey. Peter R. de Vries wuxuu ahaa taageere sharciyeynta daroogada. Tani waa sida kaliya ee lagula dagaallami karo jariimada si wax ku ool ah, ayuu u maleynayay, maxaa yeelay taasi waxay ka horjoogsan doontaa dambiilayaasha qaab dakhligooda.
Gudoomiyaha Ururka Booliska Nederland, Jan Struijs, wuxuu qirayaa, in kastoo dadaal kasta la muujiyey, in boolisku uusan wax badan ka qaban karin la dagaalanka dambiilayaasha daroogada. Wuu ka baryay Nieuwsuur daawashada sii deynta daroogada, oo ay weheliso daryeel caafimaad oo wanaagsan iyo ka hortag. Warbaahinta kale, sida tan AD iyo NRC shaki ka qabo habka cadaadiska hadda jira oo la soco in dagaalka daroogada aan lagu guuleysan karin muddada dheer.
Waan ku raacsanahay tan. Waxaa la joogaa waqtigii qaabab kala duwan oo xag-jir ah Qaabka dakhliga ee dambiilayaasha daroogada laguma xallin karo xukunno adag, ganaaxyo badan iyo ganaaxyo badan, maxaa yeelay taasi waxay ku guuleysan doontaa iska soo horjeedka saxda ah. Natiijada ugu dambeysa ee dagaalka daroogada ayaa ah in dambiilayaasha ugu rabshadaha badan ay gaaraan meesha ugu sareysa, sida uu qabo Tom Decorte oo ku xeel dheer dambiyada.
Qaabka dakhliga ee dambiilayaasha daroogada waxaa sida ugu wanaagsan loola tacaali karaa sharciyeynta, nidaaminta iyo xakameynta soo saarista, qeybinta iyo iibinta daroogooyinka sharci darrada ah, iyadoo si habboon dadka loogu ogeysiinayo halista la xiriirta isticmaalka daroogada qaarkood iyo cashuur bixinta si loo maalgeliyo macluumaadka iyo ka hortagga. Sida la mid ah khamaarka internetka hadda. Bishii Juun 2021, Wasiirka VWS, Tamara Van Ark (VVD), ayaa yiri waxyaabaha soo socda ee ku saabsan tan:
"Fikradda ayaa ah in markay wax dhacaan, aad nidaamiso, waad la socon kartaa, waxaad u dejin kartaa sharciyo, waxaadna hubin kartaa inay wax wanaagsan ku dhacaan wixii ka soo baxa." Muxuu qaabkani u khuseeyaa mid (sida la qabatimay, sida wax u baab'inaya iyo sida dambiga loo galayo) faylka, laakiin aan loo adeegsanayn mid kale?
Sidoo kale wax badan duqa magaalada aaminsan yihiin in qaabka dakhliga ee dambiilayaasha daroogada wax laga qabto. Talaabada ugu horeysa waa sharciyeynta iyo sharciyeynta beerashada, iibinta iyo isticmaalka xashiishka. Badhasaabyada ayaa dhawaan soo saari doona bandhig. Sannadkii 2020, saynisyahannadu waxay hore u soo jeediyeen in la qaado qaab ka duwan kan Muujin siyaasad daroogo oo macquul ah. Baaqaas waxaa taageeray D66 iyo dad badan oo caan ah oo reer Holland ah, oo uu ka mid yahay Peter R. de Vries.
Waxaan u ahay Sababta oo ah siyaasadda daroogada ilaa hadda waxay ahayd mid gebi ahaanba guuldareysatay. ”
Ma jeceshahay wariye danbi @DalsanFM in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee loo qaadan lahaa daroogo kale?
Sidoo kale ku dhawaaq naftaadahttps://t.co/qTaEomjiIw#ikmaakmedrug pic.twitter.com/1ducts7yb6z
- D66 (@ D66) January 20, 2020
Waxaad u maleyneysaa in xildhibaanada mas'uulka ka ah siyaasada daroogada ay si dhow ula socdaan dooda bulshada ee ku saabsan siyaasada daroogada iyo inay diyaar u yihiin inay ka fekeraan habka ugu wanaagsan. Laakiin maalintii ugu dambaysay ka hor fasaxa xagaaga, aqlabiyad badan oo Golaha Wakiiladu waxay u codeeyeen a mooshinka CDA iyo Christian Union isagoo ugu yeeray golaha wasiirada inay nitrous oxide Maaddaama ay ka mid yihiin Walxaha Cilmi-nafsiyeed ee Cusub, si loogu diro wax-ka-beddelka Xeerka Opium-ka Golaha bilowga Sebtember iyo in lacag dheeraad ah oo qaab dhismeed ahaan loo heli karo lagu hirgeliyo laguna hirgeliyo labada soo-jeedin Maaha wax kadis ah in labada wasiir ee masuulka ka ah siyaasada daroogada ay kala yihiin CDA (Grapperhaus) iyo ChristenUnie (Blokhuis).
Aqlabiyadda Goluhu waxay rabaan in golaha wasiirrada ee waqtigu ka dhammaaday ay ku degdegaan mamnuuca oksaydhka iyo mamnuucida dawooyinka naqshadeeyayaasha. Sidee magaca Eebbe ugu jiraa inay taasi suurogal tahay, iyada oo la tixgelinayo doodda bulsheed ee hadda ka taagan siyaasadda daroogada iyo dhammaan calaamadaha mamnuucaya inay ka sii dari doonaan dambiyada daroogada? Meelmarinta walxaha sharci darrada ah horeyba waa dhibaato. Tan kuma xallin kartid adoo mamnuucaya walxo badan, maxaa yeelay markaa waa inaad sii xoojiso. Adiga oo sharciyeeynaya daroogada waxaad sameyneysaa wax sax ah karti laga sii daayay booliska qalad kale.
Xaqiiqdii, Mr DR Ugsdealer aad buu ugu qancay mamnuucista 3-MMC ee dhowaan soo baxday dadweynaha mahadsanid warqad u qoray xubnaha Golaha Wakiilada, taas oo uu ku boorrinayo mudanayaasha inay mamnuucaan xitaa daroogooyinka badan. Xayiraad kasta, dakhligiisu wuu kordhayaa, sababtoo ah mamnuucitaanku ma saameynayo nooca ganacsiga ee dambiilayaasha daroogada, waxay kaliya ka dhigeysaa inay iyaga ka taajiraan.
Xubnaha baarlamaanka ayaa hada umuuqda kuwo laqabatimay mamnuucida naftooda. Iyagu ma diidaan inay sameeyaan iyagoo diidan, way ku raaxaystaan, waxay u sameeyaan sababtoo ah waxay dareemaysaa inay sax tahay. Kaliya fiiri barta twitter-ka ee xildhibaanada CDA iyo ChristenUnie. Waxay si guul leh ugu dhawaaqayaan mamnuucitaankii ugu dambeeyay! Dhibaatada kaliya, sida dhammaan balwadaha, waa in ay wanaag dareento illaa ay saameyntu ka dhammaato. Kadibna waa inaad markale dhaliso. Xabad kale! Mamnuuc kale! Waa maxay farxad!
Xusuus mudan maalintii ugu dambeysay ee Binnenhof! Ku dhaqaaq mooshinka ku #xoogaa cagaaran en #qormooyinkabadan in la mamnuuco aqlabiyadda Golaha Wakiilada ayaa la meel mariyay! @cdavandaag pic.twitter.com/3kZkByMLmp
- Anne Kuik (@AnneKuik) July 9, 2021
Waxaan u rajeynayaa Anne Kuik iyo Mirjam Bikker xoog badan oo ku saabsan aqoonsiga iyo qirashada balwaddooda. Aqoonsigu wuxuu furayaa wadada caawimaad raadinta. Nasiib wanaagse, Nederland waxay leedahay xarumo wanaagsan daaweynta qabatinka halkaas oo ay matali karaan dadku, hay'ado, si lama filaan ah, sidoo kale u taageera sharciyeynta iyo nidaaminta daroogada.
Maxkamadda Sare ee Mexico waxay xukuntay isticmaalka madadaalada xashiishka kadib markii sharci-dajiyayaashu aysan wax fal ah sameynin
Mexico waxay xakamaynaysaa xashiishadda iyadoo Maxkamadda Sare ay soo saartay sharciyo fiidnimadii Isniinta ee la soo dhaafay mamnuucaya isticmaalka madadaalada of